UMyuziyam oMtsha wemihla ngemihla (iMoco) uvula e-Barcelona
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » ISpain Iindaba Eziphambili » UMyuziyam oMtsha wemihla ngemihla (iMoco) uvula e-Barcelona
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Education • ukonwatyiswa • Iindaba eziNqabileyo zaseNetherlands • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Imyuziyam yaseMoco ithatha indawo kaPalacio Cervelló, eyayisakuba yindawo yokuhlala yabucala yosapho lwaseCervello de kwangenkulungwane ye-18.
IZiko loLondolozo lweMbali lale mihla (iMoco) liphinda imodeli yalo yemyuziyam ebandakanya iBarcelona, ​​eSpain.
Emva kwempumelelo yayo eAmsterdam, uMoco uphinda ukuzibophelela kwakhe ekuboniseni imisebenzi yamagcisa ngamagcisa awaziwayo kwilizwe liphela kunye neenkwenkwezi ezikhulayo.
IMoco Museum izakuvula iingcango zayo ngomhla we-16 kweyeDwarha 2021 nge-16th Ibhotwe lenkulungwane embindini wedolophu.
The IMyuziyam yanamhlanje (iMoco) Iphinda imodeli yayo ebandakanyayo e-Barcelona, ​​eSpain. Ngomhla we-16 ku-Okthobha u-2021, iMoco Museum yase-Barcelona ivula iingcango zayo kuluntu, iphawula isahluko esitsha semyuziyam ezimeleyo.
Ubugcisa bemihla ngemihla
Ukulandela impumelelo yayo kwi AmsterdamUMoco uphinda ukuzibophelela kwakhe ekuboniseni imisebenzi yamagcisa ngamagcisa awaziwayo kwilizwe liphela kunye neenkwenkwezi ezikhulayo. UMoco Amsterdam kuqala yavula iingcango zayo ngo-Epreli ka-2016. Namhlanje, iMuseum Museum yaseAmsterdam yamkele phantse iindwendwe ezizizigidi ezibini ezivela kumazwe ali-2 ahlukeneyo. Kwiindwendwe ezininzi, iMoco yindawo yokungena kwihlabathi lobugcisa. Siyazingca ngokwamkela abaphulaphuli abaselula abasityelelayo kwaye bathande ubugcisa okokuqala ngqa.
IMoco Barcelona unemisebenzi yobugcisa evela kuAndy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Banksy, Salvador Dalí, Damien Hirst, Keith Haring, KAWS, Hayden Kays, Yayoi Kusama, David LaChapelle, Takashi Murakami, & Ngaphezulu! Idijithali yamava obugcisa bokuntywila ovela kwiqela leLab, iLes Fantômes, kunye ne Studio Irma.
I-Esplendor de la Noche by UGuillermo Lorca: UMoco ubonakalisa umboniso wokuqala wase-Yuropa ovela kumzobi weChile wangoku kumdlalo odibanisa umlingo kunye nobunyani. Ikhethwe nguSimon de Pury, ifandesi yodumo, umthengisi wezobugcisa kunye nomnye wabantu abaphambili kwilizwe lobugcisa.
IqelaLebhu: Ubugcisa beDijithali yokuntywila
Indawo yokuqala yaseYurophu enikezelwe kwimiboniso ye-NFT.
Imyuziyam yaseMoco Barcelona
Ifumaneka kwi-c / Montcada 25 e-Barcelona. Imyuziyam yaseMoco ithatha indawo kaPalacio Cervelló, eyayisakuba yindawo yokuhlala yabucala yosapho lwaseCervello de kwangenkulungwane ye-18. Ukususela kumaXesha Aphakathi ukuya kwi-20th Ikhulu leminyaka, abahloniphekileyo, abathengisi kunye neeroyals zibambelele kule ndawo yembali. Ngentlonipho enkulu yesakhiwo esele sikhona, iStudio Pulsen yaphinda yafumana eyona ntsingiselo iphambili yePalacio Cervelló-ukuziqhelanisa neemfuno zeMoco Museum ukwenza indawo enkulu yanamhlanje neyangoku.
Oku kuthathwa kwesithuba kubonisa inyathelo lokuqala likaMoco, xa lithathe indawo yeVilla Alsberg (b. 1904) eAmsterdam - isakhiwo ngokwembali esasibekelwe abantu abakhethekileyo. Kwakhona, iMoco Museum itshintsha amandla esithuba esikhethekileyo ukwamkela bonke. Nangona kunjalo, iAmsterdam incinci kakhulu ukuba ingabonakalisa onke amaphupha ethu, kwaye indawo yethu yokubonisa inciphile. Kukho ubugcisa obuninzi ngakumbi esifuna ukwabelana ngabo kunye namabali amaninzi okunokubalisa.